Nhoroondo yekambani - Weifang Naipute Gesi Genset Co., Ltd.
Weifang Naipute Gesi Genset Co., Ltd. yakavambwa muna 2008. Hofisi iri muHquququereter Base muWeifang guta, purovhinzi yeShandong uye kune traffic iri nyore uye nharaunda inonakidza yakatenderedza. Fekitori iri muAdvanced Manufacturing Industry Park nerutsigiro rwehurumende uye yakanaka indasitiri mamiriro. Sezvo zita reNPT rakagadzwa, zvigadzirwa zvikuru 10kW-1000kW gasi jenareta seti, kusanganisira gasi jenareta seti, biogas jenareta seti, oiri munda gasi jenareta seti, marasha-mubhedha gasi jenareta seti, lpg gasi jenareta seti, biomass gasi jenareta seti nezvimwewo uye NPT inovavarira kushandisa yakachena simba, kuchengetedza nharaunda uye kudzikisa mashandiro ekushandisa. Kambani yeNPT yekambani yeR & D neboka revatungamiriri vane ruzivo rwakawanda paR & D, kugadzirwa uye manejimendi. Kwemakore, NPT yakavaka timu yehunyanzvi ine hunyanzvi hwehunyanzvi uye hunhu hukuru.
Tekinoroji inotungamira zvigadzirwa. NPT inogadzira zvigadzirwa seyazvino jenareta seti chigadzirwa yesainzi yekuvandudza maitiro zvakanyanya, sanganisa yakanyanyisa chigadzirwa chigadzirwa pfungwa uye yakachengetedza kwenguva refu kutaurirana pamwe nekubatana nenyika-inozivikanwa mukurumbira masosi uye makoreji, akadai seAVL uye FEV nezvimwewo Conceptual dhizaini, mashandiro ekuenzanisa, kusimudzira kwekuenzanisira, kuvandudza mashandiro, kuyedza kuyera uye kuvimbika kwekuvandudza kwave kuchinyatso kuenderana nesainzi process.NPT chigadzirwa chakateedzana chinosanganisira NQ, NW, NS, ND uye NY uye simba renzvimbo rinofukidza 10 kW kusvika 1000 kW.
Weifang Naipute Gesi Genset Co., Ltd.
Chikwata chedu chave kuita R & D yemagetsi zvigadzirwa zvemagetsi kweanopfuura makore makumi matatu muinjini huru yeChina
NPT gasi jenareta yakatarwa yapfuura ISO9001 yepasi rose mhando system chitupa uye CE chitupa. Technical parameter inosangana neChina GB / T8190 (ISO8178) zviyero. Kuchengetedzwa, kugadzikana uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvakawana iyo inoenderana Nenyika Maindasitiri Mitemo. Mazuva ano, NPT gasi jenareta seti ave achizivikanwa pasi rese uye achikosheswa zvakanyanya nevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Uye ivo vakasimudzirwa zvakanyanya uye vakaiswa munzvimbo zhinji, senge oiri indasitiri, gasi indasitiri, hombe yekudyara yezvipfuyo, yepakati nepakakura biogas chirongwa, mugodhi wemarasha, chirimwa chekurasa marara zvichingodaro. Zvichakadaro, zvigadzirwa zveNPT zvakatumirwa kunzvimbo dzinosvika makumi mana nematunhu, seGerman, United Kingdom, America, Japan, Czech, Spain, Sri Lanka, Italy, Australia neFrance nezvimwe uye zvinopfuura zvirongwa zana zvakaitwa uye mukati mashandiro.
Iyo ine epamberi emagetsi bvunzo zviridzwa, inofanidza mashandisiro emashandisirwo emamiriro, uye inonyatso tarisa iyo chigadzirwa dhizaini uye kugadzirwa pamwe neyekuyedza bvunzo maitiro;
Akatora chikamu mukutsvagisa nekusimudzira mapurojekiti mumunda wesimba remagetsi, uye akahwina mibairo yesainzi uye tekinoroji kufambira mberi kwakapihwa nehurumende pamatanho ese;
Kambani yedu yakagadzira kuhwina-kuhwina kwakabatana kudyidzana hukama nevekunze vanozivikanwa injini vagadziri, mubatanidzwa R & D uye kutumwa kugadzirwa.
NPT kambani ine mainjiniya mazhinji, yedu R & D timu inogona kuita yakasarudzika chigadzirwa dhizaini uye mazano maererano nezvinodiwa nemushandisi;